Andron'ny Manamboninahitra 2020 | Primature
Mahazoarivo, ny 12 janoary 2020 – Toy ny isan-taona dia ankalazain’ny Tafika Malagasy manerana ny nosy ny 12 Janoary, Andron’ny Manamboninahitra. Nanamarika izany ny teto Mahazoarivo, ka an-kafaliana hatrany no nandraisan’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, anjara sy nanomezany voninahitra ny lanonana androany. Araka ny fomba fanao mandritra ny fankalazàna dia ireo manamboninahitra zandriny no nitarika ny fibaikoana. Fotoana iray koa anefa io nifanakalozana ary nanamafisana ny firaisan-kina, ka ankaotra ny hetsika nokarakaraina dia nisy ny fanolorana gisa ho an’ireo zoky, dia ny Praiminisitra sy ireo lehiben’ny manamboninahitra tao an-toerana, ho mariky ny fanajàna sy fankasitrahana azy ireo.
Nanambara ny Praiminisitra nandritra ny lahateny nataony fa ao anatin’ny vanim-potoana fanarenana ny firenena isika izao, ka ankoatra ny laharam-pahamehana izay tsy maintsy hotontosaina mba hanatrarana ny fampandrosoana ny firenena dia hojerena ny hanatsarana hatrany ny hampitaovana ny manamboninahitra eo anivon’ny « Bataillon de sécurité de la Primature (BSP) » izay sampana iray miandraikitra ny fiarovana.
Ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, dia miarahaba sy mirary fahombiazana ho an’ireo manamboninahitra rehetra, amin’ny fanompoana ity tanindrazana malalantsika ity, amin’izao Andron’ny Manamboninahitra izao.
Raha tsiahivina ny tantara dia ny 12 janoary 1967 no namoaka ny andiany voalohany amin’ny manamboninahitra ny Akademia miaramila ao Antsirabe.
← Conseil du gouvernement du Mercredi 08 Janvier2020
Fidinan’ny governemanta tany Isalo – Vohipeno →